Maro amin'ireo mpikarakara ny haran-dranomasina sy mpitsabo no manatrika sy mitarika fivoriana ho anjara asa isan'andro na isan-kerinandro. Ny ankamaroan'ny mpitantana dia mila fahaiza-manaon'ny fanamorana tsara mba hahomby satria matetika izy ireo dia mitarika ny famolavolana fanapaha-kevitra momba ny fitantanana ny harena voajanahary ary mitady ny fandraisana anjara avy amin'ireo mpandray anjara isan-karazany.
Ny mpanamora iray dia manohana ny fizotry ny fivoriana amin'ny alàlan'ny fitazonana ny vondrona amin'ny làlana hahazoana ny tanjona tadiavina. Ny tsara indrindra, ny mpanamora iray dia tsy mandray anjara amin'ny fivoaran'ny fivoriana. ref Ny asan'ny mpandrindra dia ny mifantoka amin'ny dingana mahomby (fihaonana dinamika), izay ahafahan'ny mpandray anjara mifantoka amin'ny votoatiny na ny votoatin'ny asa ataony.
Rehefa ilaina ny tsy fisian'ny atsy na ny aroa, na rehefa mifampiraharaha amin'ny olana mampikorontan-tsaina, dia handray soa ny vondrona amin'ny fampiasana mpandrindra avy ivelan'ny fikambanana na ny birao. Ny fampiasana mpanazatra matihanina dia tena namporisihina rehefa hanatrika ny mpandray anjara 40 ny fivoriana.
Ireo mpikarakara ny haran-dranomasina no mihazona fivoriana na atrikasa ho:
Fantaro ireo laharam-pahamehana iombonana
Manorà na manavao drafitra fitantanana
Mianara avy eo
Ny fahatsapana iraisana dia ny fametrahana ireo manam-pahaizana na mpiray antoka rehetra ao anatin'io efitrano io ihany no hamoaka azy ireo vokatra tsara. Tsy matetika izany. Ny ankamaroan'ny fivoriana na atrikasa dia mila fanamorana mba hahatratrarana vokatra tadiavina. Ny fivoriana iray tena mora vidy dia sady mahomby kokoa ary mahomby kokoa.
Fomba hanomanana fivoriana mahomby
Ireto manaraka ireto dia azo atao mba hanomanana fivoriana na atrikasa mahomby. Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny dingana tsirairay dia jereo ny Fampidiran-drafitra momba ny Fandrindrana fivoriana na fivoriambe ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPDF, 135k).
Farito ny tanjon'ny fivoriana sy ny tanjony - Anontanio, maninona isika no manatrika io fivoriana io?
Mamorona lisitry ny mpandray anjara - Ho an'ny fivoriana hahitana fahombiazana dia mila mandray anjara ny olo-marina.
Mametraha andraikitra - Fantaro ny anjara asan'ny olona amin'ny fivoriana.
Ampivoaro ny fandaharam-potoana - Ny fandaharam-potoana dia manome ny rafitra mifantoka amin'ny fivoriana, mametraka asa ao anatin'ny filaminana sy ny fotoana voafetra, ary manolotra drafitra amin'ny fanoratana ny famintinana amin'ny famaranana ny fivoriana.
Fantaro ireo fitaovana ambadika - Omeo ny fampahalalana ilaina ilaina mba handray anjara amin'ny fivoriana ny mpandray anjara.
Amboary ny toeran'ny fivoriana - Ny ampahany manan-danja amin'ny fivoaran'ny dinamika dia ny tontolo manodidina ny fihaonana.
Fanatanterahana fivoriana mahomby sy fampahaizam-pamokarana
Ny fianarana ny fomba fanamorana ny tarika dia mahomby. Mitaky ny fifandraisana amin'ny vondrona mahazatra izany, ny fitantanana fotoana, ny fampiasana teknika hanampiana ireo vondrona amin'ny fanatanterahana ny tanjon'izy ireo, ary ny fampiharana amim-pahombiazana rehefa manelingelina ny fitondran'ny olona amin'ny fivoriana.
Fanatanterahana fivoriana mahomby dia manome tari-dalana momba ny fomba hanaovana fivoriana mahafa-po, ahitana ny antsipiriany momba ny fanantenana andrasana, ny fitantanana fotoana, ny fametrahana fitsipika momba ny tany sy ny fandraisana feedback.
Fampandrosoana dia manome fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fomba fampihetseham-poko matetika sy ampiasaina amin'ny fanamorana ny tranonkala sy ny konferansa video.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampidirana ny fandraisan'anjaran'ny mpandray anjaramanokatra fisie PDF